February 2021 – KHAATUMO NEWS
Warbixin uu shaaciyay sirdoonka Mareykanka ayaa waxaa lagu ogaaday in Amiirka dhaxalsugaha ah ee Sucuudiga, Maxamed bin Salmaan, uu ansixiyay dilka weriyaha qurba-joogga ahaa Jamaal Khaashuqji sanadkii 2018. Warbixinta oo uu shaaciyay maamulka madaxweyne Biden ayaa waxa ay tibaaxaysaa in amiirka uu ansixiyay qorshada in la soo qabto ama laContinue Reading
“Soomaaliya ma kala go’i karto,.” Prof Buuba oo Hargeysa kula hadlay saxaafadd Dr. Ismail Hurre Buubaa, oo Hargeysa Kula hadlay warbaahinta, “Qofkii igu nacaya iyo kii ka naxaya, Soomaaliya ma kala go’i karto, haddii aynnu doonayno nolol tan dhaanta inaynu ku noolaano waa in la midoobo”Continue Reading
Warar dheeraad ah ayaa kasoo baxaya khasaaraha ka dhashay weerar ay dagaalyano ka tirsan Al-Shabaab ka fuliyeen gudaha dalka Kenya. Weerarka oo ahaa mid culus ayaa si gaar ah uga dhacay duleedka magaalada Mandera oo ka tirsan gobolka Waqooyi Bari ee dalkaasi. Ilo wareedyo lagu kalsoonyahay ayaa sheegay in weerarkaContinue Reading
Taliyaha Madaaficidda ee Ciidanka Somaliland G/sarre Cali Cawaale ayaa ku dhaawacamay gadood ay sameeyeen Ciidamada ku sugan deegaanka Tukaraq. dhaawaca taliyaha ayaa lagu dabiibayaa Cisbitaalka guud ee magaalada Laascaanood. Ciidankan ayaa maalmihii ugu danbeesay ka gadoodsanaa Askari ka mid ahaa oo kelyuhu fadhiisteen oo waxba laga qaban wayay xaaladiisaContinue Reading
Ciidamada millatariga Somaliland ee nabad ilaalinta u joogey deegaanka Dararweyne ee gobolka Sanaag, ayaa kasoo baxay fadhiisinnadii ay ku sugnaayeen, iyagoo dul degay magaalada Ceel-Afweyn. Ciidankan oo gadoodsan ayaa degay labada Kontarool ee magaalada Ceel-Afweyn. Taliska Milatariga Somaliland ee gobolka Sanaag ayaa isku dayay inay ciidanka ku qanciyaan inay kuContinue Reading
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa soo dhaweeyey Heshiiska dhexmaray Dowladda iyo Midowga Musharaxiinta oo xalay wadajir loo soo saaray. Madaxweynaha ayaa ku bogaadiyey Ra’iisul Wasaaraha XFS Mudane Maxamed Xuseen Rooble dadaalka uu ku bixiyey heshiiska wadajirka ah iyo guud ahaan maareynta arrimaha doorashooyinka iyo sida ay ugaContinue Reading
Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Xuseen Rooble oo shir wadatashi la qaatay Midowga Musharaxiinta ayaa tilmaamay in wadahadalladu ay ahaayeen kuwo miro dhal ah oo ka tarjumaya biseylka siyaasadeed iyo u tanaasulka danta guud ee dalka.Continue Reading
Dawlada Federaaka Soomaliya Ayaa Joojisay Mudaharaadkii mucaaradka dawlada Federaalka Soomaaliya Waxaa lagu Waday In Uu Bari Ka Dhaco Magalada MuqdishoContinue Reading
Ra’iisul wasaaraha Xukuumadda JFS mudane Maxamed Xuseen Rooble ayaa hoteelka Decale kulan kula leh Midowga Musharaxiinta.Ra’iisul Wasaaraha ayaa kala hadlaya murashaxiinta arrimaha doorashooyinka iyo amniga dalkaContinue Reading
Waxaa haatan Shir uu uga Furmay Magaalada Muqdisho Midowga musharixiinta iyo DFS oo uu Shirkaan kumatali Doono Ra’isulwasaare Maxamed xuseen rooble waxaana looga hadlayaa Qodobo ay kamid yihiin Banaanbaxyada Lafilayo iney bari ka dhacaan Muqdisho, waxaana kulankaan sido kale ku sugan madaxweynayaasha Hirshabeele iyo Galmudug Midowga Musharixiinta ayaa dhankooda doonayaContinue Reading